OnePlus 6T McLaren Edition: Nkọwapụta, ọnụahịa na mmalite | Gam akporosis
Onye OnePlus 6T McLaren Edition bụzi nke gọọmentị
Ná ngwụsị nke ọnwa Nọvemba, a kwadoro na OnePlus na McLaren na-esonyere ndị agha iji wepụta ụdị pụrụ iche nke akara ngosi kachasị ọhụrụ nke ndị China, dika anyi gwara gi. Ihe dị ka izu abụọ mgbe ọkwa a gasịrị, anyị agafeela na-abịarute ụfọdụ nkọwa banyere ngwaọrụ a. N'ikpeazụ, E gosipụtarala OnePlus 6T McLaren Edition na ọkwa. Ọhụrụ elu-akara nke ika, na ụfọdụ ndozi.
The OnePlus 6T McLaren Edition bụ nyocha nke njedebe dị elu nke akara ika China gosipụtara na njedebe Ọktọba. Anyị na-ahụ ọtụtụ mgbanwe na nkọwa ya. Ya mere, egosiri ya dika mbipute puru iche, ihe zuru ezu. Kedu ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na ekwentị?
Ike na ọsọ a na-egosi ha dị ka ihe kachasị mkpa nke nsụgharị a dị elu. Mana ọ bụghị naanị ha gbanwere n’ime ya. Ọzọkwa ngwa ngwa Nchaji nke ekwentị e ọhụrụ maka nke a version. Ya mere ndị ọrụ nwere ike ịtụ anya ọdịiche.
1 Nkọwapụta OnePlus 6T McLaren Edition
Nkọwapụta OnePlus 6T McLaren Edition
Anyị nwekwara ike ịmasị ụfọdụ mgbanwe na mpụta ekwentị. A na-ahụ ha mgbe anyị lere azụ ya anya karịa. Mgbe ahụ anyị na-ahapụ gị na Nkọwa zuru ezu nke OnePlus 6T McLaren a:
Ihuenyo: AMOLED Optic nke 6,41 sentimita asatọ na nha mkpebi 2280 x 1080 pikselụ na nha 19: 9
Nhazi: Qualcomm Snapdragon 845 octa-core nwere 4 x 75 GHz Cortex A2.8 na 4 x 55 GHz Cortex A1.8
Nchekwa ime: 256 GB (Enweghị ike ịgbasa na microSD)
Kaadị esereseNwunye: 630
Rear igwefoto: 16 + 20 MP nwere oghere nke f / 1.7 na sensọ abụọ na ikanam Flash
Igwe n'ihu: 20 MP nwere oghere f / 2.0
Njikọ: Dual SIM, Bluetooth 5.0, 4G / LTE ,, WiFi 802.11a / b / g / n / ac, USB Type-C
ndị ọzọ: NFC, akara mkpisiaka ihe mmetụta ike na ihuenyo
Usoro njikwa: Akara 9.0 A gam akporo Oxygen OS dị ka oyi akwa nhazi
Batrị: 3700 mAh na Warp ụgwọ na 30W ike chaja
Akụkụ: 157.5 x 74.8 x 8.2 mm
Dịka ị pụrụ ịhụ, anyị na-ahụ usoro mgbanwe na nkọwa nke ekwentị ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere mbipụta nkịtị ya nke ewepụtara na ngwụsị Ọktọba. Improvementsfọdụ ndozi nke na-eme ka ihe nlere a dị ike karị. Otu n’ime ihe ndị dị na ya. Ezigbo ike na ọsọ. Karịsịa ugbu a ọ na-abịa na RAM 10GB.
Ihe ohuru ohuru abiala na akwukwo OnePlus 6T McLaren a. The azụ nke elu-ọgwụgwụ adapts ka aesthetics nke ụgbọ ala emeputa. Agba ojii na-achịkwa azụ, na-enwe ọdịdị pụrụ iche ma anyị nwekwara ike ịhụ na epe oroma n'akụkụ ya. N'ụzọ dị otú a, ha na-enweta atụmatụ dị egwu karị, nke gosipụtara n'ụzọ zuru oke mmekorita n'etiti ụlọ ọrụ abụọ ahụ.
Akụkụ ọzọ nke emelitere na ekwentị bụ ụgwọ ya, kpọmkwem ụgwọ ngwa ngwa. N'okwu a, anyị chere usoro Warp ọhụrụ n'ime ya, yana chaja 30W. A na-atụ anya nnukwu ike na ọsọ ọsọ na ibu a. Ebe ọ bụ na ọ mara na 50% nke batrị nwere ike ebubo na naanị nkeji 20 ekele ya.
Maka ndị nwere mmasị na OnePlus 6T McLaren Edition a, enwere ozi dị mma. Dị ka ị gaghị echere ogologo oge ruo mgbe a ga-ahapụ ya. Dị ka ọ dị na mbụ, a ga-ere ahịa ahụ na weebụsaịtị nke ndị nrụpụta. Ọ dị ka ugbu a ọ ga-abụ naanị ụzọ iji zụta ya. Ebe ọ bụ na ọ nweghị ndị nkesa ekwenyela maka ugbu a.
Mbido ya ga-eme n'izu a, bido n’abalị iri nke ụtụtụ ruo Disemba 10 enwere ike ịzụta ya na Spain. Ọ bụ mbipụta a kpaara ókè, yabụ nkeji agaghị adị oke oke. Ya mere o yikarịrị ka ọ ga-ere ngwa ngwa. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ya, ị ga-eme ọsọ ọsọ.
Akwụkwọ OnePlus 6T McLaren na ulo oru na a price nke 699 euro. Nke a na price e leaked a di na nwunye nke ụbọchị gara aga, na ọ na-emecha ahọrọwo na emeputa maka mbipụta a. Ọ karịrị euro maka ụgwọ nke ụdị nkịtị nke ngwaọrụ ahụ site na euro 70.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Onye OnePlus 6T McLaren Edition bụzi nke gọọmentị
Bixby na-asụrị Spanish na ọkwa
Nokia 7 ga-amalite ịnata mmelite ya na Android Pie